Kamala Devi Harris (wuxuu dhashay 20 Oktoobar 1964) waa siyaasi Mareykan ah iyo qareen kaasoo ah madaxweyne ku xigeenka la doortay ee Mareykanka. Xubin ka tirsan Xisbiga Dimuqraadiga, waxaa lagu wadaa inay qabato xafiiska Janaayo 20, 2021, iyadoo ay weheliso madaxweynaha la doortay Joe Biden, iyagoo ka adkaaday madaxweynaha xilka haya Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenka Mike Pence doorashadii madaxtinimada ee 2020. Harris wuxuu ahaa senatorka yar ee Mareykanka ee ka yimid Kalifoorniya tan iyo 2017. Ahaanshaha labada Hindida Hindiga iyo Afro-Jamaica, Harris waa Mareykan jinsiyado badan leh Harris waxay noqon doontaa haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeen Mareykan ah, qofkii ugu horreeyay ee Afrikaan Mareykan ah, Mareykankii ugu horreeyay ee Aasiyaanka ah iyo qofkii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee Kariibiyaanka ah ee qabta xilka taariikhda Mareykanka. Waxay sidoo kale noqon doontaa haweeneydii ugu sarreysay ee dumar ah oo loo doorto taariikhda Mareykanka.
Wuxuu ku dhashay Oakland, Kaliforniya, Harris wuxuu ka qalin jabiyay Howard University iyo Jaamacadda California, Hastings College of Law. Waxay shaqadeeda ka biloowday Xafiiska Qareenka Degmada County ee Alameda, ka hor intaan loo qorin Xafiiska Qareenka Degmada San Francisco iyo markii dambena Xeer ilaaliyaha Magaalada San Francisco. 2003, waxaa loo doortay qareenka degmada San Francisco. Waxaa loo doortay Garyaqaanka Guud ee Kaliforniya sanadkii 2010 iyadoo markale dib loo doortay 2014.
Harris wuxuu kaga adkaaday Loretta Sanchez doorashadii golaha guurtida ee 2016 si ay u noqoto haweenaydii labaad ee reer Mareykan ah ee reer Mareykan ah iyo haweeneydii ugu horeysay ee Koonfur Aasiyaanka Mareykanka ah ee ka shaqeysa aqalka Senate-ka Mareykanka. Senator ahaan, waxay u ololeysay dib u habeynta daryeelka caafimaadka, jaangoynta federaalka ee xashiishka, wadada loo maro muwaadinimada muhaajiriinta aan sharciyeysneyn, Sharciga DREAM, mamnuucida hubka weerarka, iyo dib u habeynta canshuuraha. Waxay ku kasbatay astaan ​​qaran su'aalaheeda tooska ah ee saraakiisha maamulka Trump intii lagu guda jiray dhageysiga Senate-ka, oo uu kujiro ninka labaad ee loo magacaabay Trump ee Maxkamadda Sare Brett Kavanaugh, oo lagu eedeeyay faraxumeyn galmo.
Harris waxay u tartamaysay magacaabista madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ee 2020 waxayna ololaheeda soo afjartay bishii Diseembar 3, 2019. Waxaa lagu dhawaaqay inay tahay la tartamida Biden bisha Ogosto 11, 2020. Bishii Nofeembar 7, 2020, tartanka ayaa loogu yeeray iyadoo lagu taageerayo tigidhka Biden – Harris.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamala_Harris&oldid=210804"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Abriil 2021, marka ee eheed 19:04.